China WIK9070 Wheel Excavator Mugadziri uye Mutengesi | Wilk
WIK 9070 Chigadzirwa chinotengesa poindi
· Iyo epamba inozivikanwa brand injini ine simba rakasimba uye inosangana nezvinodiwa zvekushanda kushanda.
· Iyo chaiyo inowirirana dhizaini uye yepamusoro simba-yekuchengetedza kutonga inoita kuti mushini peturu kushandiswa
· Iko kushandiswa kweanotonhora mafeni uye makuru masilencer anoita ruzha rwemuchina kudzikira;
· Tora yepamusoro turbocharging tekinoroji kusimudzira kuchinjika kwemuchina kubani;
· Iyo yakasarudzika faneli-yakaita fan fan chifukidziro inowedzera zvakanyanya mweya mweya weinjini uye kugona kwesisitimu kudzima kupisa, kuve nekuenderera nekuenderera uye nekushanda mashandiro emuchina.
· Yepamberi hydraulic system
Kugadziridza kwepamusoro-soro: Pombi huru, vharafu huru, mota inotenderera, inofamba mota, humburumbira, vharafu yekuchaira uye zvimwe zvinhu zvese zvigadzirwa zvinozivikanwa pasi rese kuona mhando yechigadzirwa.
Sanganisa mitsva yekutsvagisa, kudzikisa kushandiswa kwesimba, kugadzirisa dhizaini, uye kupindura nekukurumidza.
Simba rakasimba uye rakaringana kutenderera kudzora: Kuvandudza maitiro ekudengenyeka kuona kuti kutenderera kumisa chiito kwakanyanya uye kugadzikana; nekuwedzera torque chengetedzo, muchina unopa masimba ane simba kutenderera;
· Cylinder ine buffer basa: boom cylinder uye stick cylinder, bhakiti cylinder rakagadzirwa ne buffer, iyo inogona kudzikisa muchina vibration uye kukanganisa, kudzikamisa ruzha uye kuwedzera humburumbira hupenyu
· Double pombi confluence tekinoroji: wedzera kuyerera kweyevha huru vharuvhu kune imwe humburumbira yeboom, tsvimbo uye bhakiti kuti uwedzere kumhanya kwekushanda.
Yakakwasharara uye yakasimba yakasimba Kuvimbika
Yakasimbiswa chassis, hydraulic simba mudhiraivho, vhiri rinodzora ekisero, kunatsiridza kushanduka uye kusimba kwemuchina.
Izvo zvakakosha zvinotsanangurwa zvikamu zvemuti zvinotora chimiro chekuumba, icho chinogona kubvisa kushushikana uye kugadzirisa kugadzikana nekushandura chimiro uye ukobvu hwendiro.
Iyo boom inosanganisirwa simbi uye yakaumbwa, uye pakupedzisira muchina unofinha unofinha, uye oxane inogadziriswa, iyo inogona kusimbisa kusimba kwemaoko makuru uye madiki, kuwedzera hupenyu hwebasa hwepini uye ruoko, nokudaro uchidzivirira iyo yekutenderera kutsemuka panzvimbo yekutenderera, uye yakasimba.
· Mapureti ekucheka bhaketi ese akagadzirwa nemapureti esimbi anoshingirira, ayo akakodzera mashandiro anorema, uye akashongedzerwa nemazino emabhaketi anoshingirira nemazino epadivi ekuvandudza mashandiro emuchina.
Kushandisa mahwendefa esimbi akaomeswa uye nekuwedzera mativi ekusimbisa mahwendefa kunatsiridza kusagadzikana;
· Uchishandisa bhaketi rakatsetseka-rakadzika, iyo yekugera nzvimbo yakashambidzika uye yakati sandara painosimudza.
· Wedzera munda wekuona mumativi ese, wedzera hwindo repamberi, hwindo repamberi uye hwindo rekumashure kuona nzvimbo yakakura yekuona, kuderedza zvikuru nzvimbo dzisingaoni, uye shanda zvakachengeteka uye nemazvo.
Kudza girazi rekudenga kuti uvandudze kutaridzika kumusoro uye nekuwedzera mweya. Girazi rinobata rinoshandiswa pamikova nemahwindo kudzivirira zuva chairo;
Zvese mashandiro ekugadzirisa zvakagadzirwa uye zvakarongedzwa maererano nedzidziso ye ergonomics.
· Iyo yekushandisa mubato iri nyore kudzora.
· Luxury yemukati-yakazara kabati, LCD inoratidzira pani, zvigaro zvepamusoro.
· Isa mweya unodziisa uye mweya unodziya kuti uve nechokwadi chekudziya nekukurumidza mumba
Akangwara mashandiro uye kuratidza
· Multi-function LCD yekutarisa ine hombe skrini, kuratidzwa kwedhijitari, kuongorora kwakazara kweanoshanda enjini (kutenderera kumhanya, tembiricha yemvura, kumanikidzwa kwemafuta, nezvimwewo), ruzivo rwakasiyana-siyana rwekushandisa rwemuchina unogona kubvunzwa chero nguva.
· Iwo mashandiro ebasa akarongedzwa nechepakati pane control panel uye anogona kusarudzwa zviri nyore nekubata mabhatani.
· Uchishandisa GPS satellite positioning system, kure kuongororwa, kukanganisa kunyevera, kugadzirisa uye otomatiki chiyeuchidzo.
Kugadzirisa nyore uye nekukurumidza uye kugadzirisa ,,,,,,,,,,,,
Sefa yemafuta, firita yemafuta ekufambisa mafuta, firita yemafuta emafuta, uye gadziriro yemafuta-yemvura yakaiswa munzvimbo dzinogona kusunganidzwa pasi kuti dziongororwe nekutsiva.
· Yakakura-inokwana peturu tangi yekureba-kwenguva mashandiro.
· Bhokisi rakakura rematurusi rinonyanya kuchengetedza zvinhu zvekuchengetedza.
Kugadziridza kwenguva refu uye kutenderera: sarudza zvemhando yepamusoro zvikamu uye zvikamu zvekuwedzera hupenyu hwebasa uye kuderedza nguva yekuchengetedza yemuchina.
WIK 9070 Ipa hunhu
Muenzaniso: WIK9070 Wheel Excavator
Scoop chinzvimbo (m³): 0.21
Kutendeuka kumhanya (RMP): 0-12
Kunonyanyisa kukwira materu (°): 25
Kunonyanyisa kuchera simba remugomo (KN): 45
Simba rekuchera tsvimbo (KN): 36
Injini mhando: YC4DK85
Simba / kumhanya (KW / rmp): 62.5 / 2200
Rudzi rweTire: 8.25-16
Sisitimu yekumanikidza (MPa): 20
Kureba kwekuchera kukwirira (mm): 6245
Kunonyanyisa kudzikisa kukwirira: 4630
Kunonyanyisa kuchera kudzika (mm): 3820
Kunonyanyisa kutwasuka kwekuchera kuchera (mm): 2700
Kunonyanyisa kuchera nharaunda (mm): 6360
Minimum wekutendeuka nharaunda (mm): 2450
Kunonyanyisa pasi clearance yebhurldozer:（mm）: 310
Kunonyanyisa kunyura kudzika kwebulldozing board (mm): 130
Zvakawanda zviyero urefu * upamhi * kukwirira (mm): 6300 * 2205 * 2850
Kukwirira kweCab (mm): 2850
Wheel (track) chinhambwe (mm): 1675
Kubviswa kwepasi pasi (mm): 260
Radiyo yemuswe gyration (mm): 1940
Zvokuchera mavhiri zviri nyore kufamba. Ivo anonyanya kushandiswa kune madiki mapurojekiti muguta uye anoshandiswa kumatunhu manejimendi manejimendi. Usashande munzvimbo dzakanyorovera. Rudzi rwevhiri rinowanzo shanda pasimende pasi uye patsangadzi, uye kazhinji hazvikuvadze nzira yemumugwagwa. Track chishandiso cheprojekti, icho chinogona kupwanya mugwagwa pamusoro. Chinangwa chikuru chevacheri vemavhiri hachisi icho chemhando inokambaira. Iko kushandiswa kwevanochera mavhiri kunokanganiswa nharaunda uye kune zvimwe zvisingakwanisike. Inogona chete kuita basa diki. Zvinokambaira vanocherekedza vanogona kunyatsoenderana nechero basa kana nharaunda.
Wheel excavator imuchina wekuchera nematai sechikamu chekufamba, chinonzi sevhiri vhiri. Kuchera vhiri kune kumhanya kwekumhanya, hakukuvadze nzira yemugwagwa, kunogona kuendesa pachako pachinhambwe refu, uye kunogona kukurumidza kutsiva akasiyana ekushandisa madhizaini. Iyo yekumhanyisa yekumhanyisa kumhanya kwevekunze mavhiri ekuchera kazhinji ari 25-40km / h, uye mazhinji epamba ari 20-35km / h. Kunyangwe hazvo mashandiro emabasa ekuchera mavhiri asina kunaka seaya ekuchera giredhi, zvichienzaniswa nemari inodhura yekuchinjisa yekukambaira, kuchera vhiri kune zvakwakanakira hupfumi kana uchichinjisa nzvimbo kazhinji. Izvo chaizvo nekuda kwezvakasiyana maficha ekufamba, kushanduka, uye kugona kuti kuchera vhiri kwave kuchishandiswa zvakanyanya mukuchera nekubvisa zvinhu zvakaita semaseya ekuchengetedza mapurojekiti, mugwagwa wekufambisa wekufambisa uye nekukurumidza kugadzirisa.
Iyo huru dhizaini ye hydraulic vhiri yekuchera inoumbwa nekushanda chishandiso, cab, slewing mashandisiro, simba mudziyo, kufambisa kudzora mashandiro, chassis uye anobatsira michina. Pakati pavo, iyo tekisi, simba remagetsi, uye zvekubatsira zvigadzirwa zvese zvakaiswa pane yakazara-slewing chikuva, iyo inowanzo kunzi yepamusoro turntable. Tiresi chassis inoumbwa nefuremu, rutsigiro, giya bhokisi, hydraulic mota, kumberi nekumashure maasi, matai, nezvimwewo, uye yakaunganidzwa nemuviri unotenderera. Chishandiso chinoshanda chinonyanya kuverengerwa neboom, tsvimbo, bhakiti, yekubatanidza tsvimbo uye zvimwe zvikamu. Zvinoenderana nemaitiro ayo ekushanda, bhagidhi rine zvimiro zvakasiyana zvakaita sefoshoro yepamberi, backhoe, dhonza uye bata foshoro. Iyo boom inonyanya ine gooseneck inosanganisa yekukombama mhando uye hydraulic kupatsanurwa yakawanda-chikamu boom. Iyo yakawanda-chikamu boom yebackhoe bucket inoshandiswa zvakanyanya mune zvakafanana zvekunze zvigadzirwa.
Pashure: WIK9085 Wheel Excavator
Zvadaro: WIK9088 vhiri rekuchera
WIK9088 vhiri rekuchera